October 6, 2019 - Myitter
October 6, 2019 Myitter 0
မှော်ဘီမြို့နယ် မူ(လွန်)ဆပ်သွားတောကျောင်းဆရာမကြီးဒေါ်သန်းသန်းဝေကျောင်းသားနှင့်အတူကားလမ်းဖြတ်ကူးရာမှကျောင်းသားကိုတွန်းထုတ်ပြီးသူ့အသက်ကိုစတေးခဲ့ပါတယ်။ ကျမဆရာမကြီးကိုမမြင်ဘူးပေမယ့်ဆရာမကြီးရဲ့စည်းကမ်းကောင်းမွန်မှုတာဝန်ကျေပြွန်မှုစတဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေကျမတို့ရဲ့ပညာရေးလောကမှာပန်းသတင်းလေညှင်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်….ကျောင်းသားတစ်ဦးရဲ့အသက်ကိုကာကွယ်ရင်းအသက်စွန့်သွားတဲ့ဆရာမကြီးအကြောင်းဘယ်သတင်းဘယ်မီဒီယာမှအကျယ်အကျဉ်းဖော်ပြတာမတွေ့မိဘူး။ ကျမသတင်းနားမထောင်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဘယ်ယာအိမ်ခေါင်းဆယ်အိမ်ခေါင်းမှလည်း fb မှာရေးသားတာမမြင်မိဘူး။ အကယ်၍များးးးးးးဒီနေရာမှာသေဆုံးသူဟာကျောင်းသားဖြစ်ခဲ့ရင်မတွေးဝံ့စရာပါ။ ကျောင်းသားကိုဖင်လှန်အပြစ်ပေးလို့ကမ္ဘာကျော်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာလောကရစရာမရှိအောင်ပြောဆိုဝေဖန်ခံပြီးတဲ့နောက်မှာအမိန့်တွေအာဏာတွေတစ်ဆက်တည်းပေါ်လာခဲ့တယ်။စိတ်သာချ…. ပညာလောကရဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေဘဝနိမ့်ကျနေသမျှ…နှိမ့်ချနေသမျှခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုမည်သို့မည်ပုံတည်ဆောက်ကြမည်နည်း။ တည်ဆောက်ပါအံ့နည်း။ ဆရာမကြီးမေတ္တာစေတနာတွေကြောင့်ဆရာမကြီးကောင်းရာသုဂတိရောက်ပြီဟုကျမယုံကြည်ပါသည်။ ကျမထက်ကြီးသည်ဖြစ်စေ။ငယ်သည်ဖြစ်စေ။ဤပိုစ်ဖြင့်ဆရာမကြီးအားဂါရဝပြုလိုက်ပါသည်။ ဆရာမကြီးရဲ့တပည့်အပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတရားကိုကျမကမ္ဘာာကျော်အောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဆရာဆိုတာ…, တကယ်အရေးကြုံလာရင်မိမိအသက်ကိုစွန့်ဖို့ဝန်မလေးဘူးဆိုတာ…. အသိတရားမရှိတဲ့အချို့မိဘတွေသိအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆရာမကြီးကျေးဇူးဟာလူသေပေမယ့်ကျမတို့ရဲ့ပညာရေးလောကမှာနာမည်တွင်ကျန်ရစ်မှာပါ။ ဆရာမကြီးမိသားစုနဲ့အတူထပ်တူထပ်မျှကြေကွဲရပါတယ်။ ဆရာမကြီးကောင်းရာဘုံဘဝရောက်ပါစေ။
ဖေဖေတို့အငြိမ့်ကနေကြတာကို စင်နောက်ကနေပြီး အားပေးနေတဲ့ မင်းမော်ကွန်းရဲ့သားငယ်လေး
လက်စောင်းထက်ရဲ့ သမီးတော်ရာဇဝင် (၇) – ရော့ခ်သီချင်းနဲ့ ပုတီးစိပ်တဲ့ သမီးတော် သမီးတော်တွေဟာ သွားလေရာမှာ ပြောစမှတ်တွင်အောင်ကို စွမ်းဆောင်နိုင်ကြ၊ တော်ကြပါပေတယ်။ ခက်တာက အာဏာရှင်ကြီးရော သူ့ဇနီးကရော ဒီသမီးတော်တွေနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့၊ ဟိုလိုတော့ မလုပ်နဲ့ဆိုပြီး ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်း လုံးဝမရှိတာပဲ။ သားသမီးတွေအပေါ် အလွန်တစ်ရာမှ သည်းခံ […]
TikTok ဆော့နေတဲ့ မိန်းမကို ဓာတ်လိုက်နေတယ်ထင်ပြီး ဝါးဆစ်ပိတ်နဲ့ ရိုက်ကယ်လိုက်ရာ သေဆုံး
မြင်းခြံမြို့နယ် ဝဲလောင်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူ မခင်စိန်သန်း သည် လင်ယောင်္ကျားမရှိခိုက် TikTokဖွင့်၍ ဝါယာကြိုးကို မိုက်အဖြစ်အသုံးပြုကာ Rapper ကျားကြီး၏သီချင်းကို သီဆိုပြီးrapအက ကနေသည်ကို အလုပ်မှပြန်လာသော မောင်အောင်တင့် က ဓါတ်လိုက်နေသည်ဟု ထင်ပြီး အနီးရှိ ၃ပေခန့်ရှိသည့် ဝါးဆစ်ပိတ်နှင့် ရိုက်နှက်ကယ်တင်စဉ် ဦးခေါင်းကို ရိုက်မိပြီး ဇနီးဖြစ်သူမှာ […]
ကလေးတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ကျောင်းသူတစ်ဦးကိုသတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်လုယူသွားသူ ဆိုတာ….😮
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကလေးတက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ကျောင်းသူတစ်ဦးကိုသတ်ပြီး ဆိုင်ကယ်လုယူ သွားသည်ဟု သံသယရှိသည့် တပ်ကြပ်ကြီးအဆင့်ရှိ တပ်ပြေးတစ်ဦးဖြစ်သူ ဈာန်မင်းထက်အား ဖမ်းဆီးရမိထားပြီး သက်ဆိုင်ရာက စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း သိရသည် ။ဖြစ်စဉ်မှာ ကလေးတက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက်နေသည့် မအေးချမ်းမွန်(ခ) ချမ်းမွန်(၁၈)နှစ် သတ္တဗေဒ(ပထမနှစ်)သည် စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက် တက္ကသိုလ်စာမေးပွဲနောက်ဆုံးနေ့က စာမေးပွဲ ဖြေဆိုပြီး […]
အာရှအဆင့် ရွှေတံဆိပ် ရယူနိုင်ခဲ့သော ကာယကြံ့ခိုင်မှုမယ် မသဲဆုအား ဒေသခံများက ဂုဏ်ပြုပွဲဖြင့် ကြိုဆို
၅၃ကြိမ်မြောက် အာရှ ကာယဗလ နှင့် ကာယကြံ့ခိုင်မှု အားကစားပြိုင်ပွဲတွင် ရွှေတံဆိပ်တစ်ခု နှင့် ငွေတံဆိပ်တစ်ခု ရယူဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့သော မသဲဆုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒလမြို့နယ်ရှိ ဒေသခံ တာဝန်ရှိသူများ နှင့် ပရိသတ်များကဂုဏ်ပြုပွဲဖြင့် ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ စက်တင်ဘာ ၃၀ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂ရက်အထိ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာတန်မြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သော […]
( Video ဖိုင်ကို အောက်ဆုံးမှာတွဲပြီး တင်ပေးထားပါတယ် ) ဖိလစ်ပိုင် က မော်ဒယ် Sinon Loresca ဟာဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ချစ်လွန်းလို့ ဒုတိယ အကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာဆိုရင် ရန်ကုန် ၊ မန္တလေး မြို့ကြီးတွေကို သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ပြီးတော့ […]
လူပျောက်ကြေညာ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ် မှုတ်ရှည်အုပ်စု၊ မှုတ်ရှည် ကျေးရွာမှ ဦးမျိုးမြင့်အောင်+ဒေါ်အုန်းမြင့်တို့၏သမီး နဝမတန်းကျောင်းသူ မစုမြတ်မွန်သည် (19.8.2019) ရက်နေ့မှ ယနေ့အချိန်ထိ အဆက်အသွယ်မရ အိမ်ပြန်မလာဘဲ ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။ ဖေ့ဘုတ် မှမိတ်ဆွေများ မတော်တဆတွေ့ရှိခဲ့ပါက မိသားစုဝင်များ အရမ်းစိတ်ပူပင် သောကရောက်နေရပါသဖြင့် အိမ်အမြန်ပြန်လာခဲ့ပေးပါလို့။ တွေ့ရှိသူများလည်း အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များသို့ဆက်သွယ်ပေးကြပါရန် အကူညီတောင်းခံထားပါသည်။ […]